> Resource > Video > Sida loo Beddelaan WLMP faylasha la WLMP Converter
.wlmp waa extention file ah oo ay isticmaalaan Windows Live Movie abuuray. Si kastaba ha ahaatee, file WLMP waa file mashruuc, ma file video ah. Taas macnaheedu waxa weeye ma waxaad ka ciyaari kartaa WLMP files ee media player kasta ama wax kasta oo kale oo software video tafatirka iwm Sidaas, kiisaska intooda badan, waxaad u baahan tahay in la badalo files WLMP in videos files ugu ballaaran. Windows Live Movie Kan sameeyey oo keliya kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo WLMP in wmv. Haddii aad u doonayo in uu badalo WLMP in qaab kale sida AVI, MP4, MOV, MKV, FLV, Mpg, MPEG, VOB, DVD, 3GP, iyo ka badan, waxaad u leeyihiin in ay isticmaalaan qalab 3-xisbi. Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waa sida Converter ah WLMP weyn, oo ha kartaa in aad beddelid files mashruuca WLMP in kasta oo qaab kale video si fudud oo dhaqso. Geedi socodka oo dhan waa mid aad u fudud, iyo tayada wax soo saarka uu yahay mid aad u fiican.
1 files Save WLMP sida video files
Ka hor inta aadan u isticmaalin video Converter si ay u qabtaan diinta video, aad u baahan tahay si uu u badbaadiyo files mashruuca WLMP sida video files. Taasi waa sababtoo ah ma jirto Converter video in si toos ah u taageeri karo files mashruuca WLMP.
Just ordi Windows Live Movie abuuray, ka dibna riix "File mashruuca Open" in la furo files WLMP aad. Next, guji "File Save the movie" si loo badbaadiyo files WLMP qaab wmv Standard-qeexidda.
2 Import video files in this video WLMP Converter
Import badbaadiyey files wmv in tallaabo 1 to this video WLMP Converter u diinta video. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay si fudud u riix badhanka on dhinaca kore ee bidix ee interface ka, ka dibna daaqad hanuuniyo aad shaqadan dhammayn. Haddii kale, waxaad ka heli kartaa faylasha wmv aad rabto in aad ku darto oo ku saabsan computer ugu horeysay, ka dibna si toos ah kuwaa oo si app this.
3 Dooro mid ka mid ah oo aad loo jecel yahay qaabab video sida qaab wax soo saarka
Dhinaca midig ee interface ah, waxaa jira guddi Qaabka Output ah. Waxaad riix kartaa image qaab ama guji saarka liiska hoos-hoos qaabka ay jiraan in la furo qaab saarka suuqa kala WLMP Converter ee. Markaas, dooro "Qaabka" category, oo taga si ay "Video" subcategory inaad doorato waxa aad rabto. Haddii aad rabto in aad ka ciyaari files, kuwaas oo qaar ka mid ah qalabka, aad si toos ah u dooran kartaa qalabka sida qaab wax soo saarka.
4 Beddelaan files WLMP
Tag geeska midig ugu hooseysa ee weyn WLMP ah video Converter 's interface ugu weyn, oo aad u baahan tahay in ay halkaas ku dhufatey "Beddelaan" button. Isla markiiba, app this bilaabi doonaa si loogu badalo files WLMP si aad u qaab aad rabto. Waxa la soo bandhigi doonaa sida soo socota.
Halka A ka dib, diinta file WLMP inuu kusoo dhamaan doono. Markaas, waxaad ka heli kartaa faylasha la gediyay galka wax soo saarka ay. Just si toos ah guji ikhtiyaarka Open Folder in la furo folder wax soo saarka. Iyo Jidka file saarka lagu meeleeyo meel ka mid ah. Waxaad u bedeli kartaa haddii u baahan.
Hadda, kaliya raaxaysan files wax soo saarka si xor ah.